सात वर्षमा शून्य दशमलव १ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ सुविधा | गृहपृष्ठ
Home समाचार सात वर्षमा शून्य दशमलव १ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ सुविधा
सात वर्षमा शून्य दशमलव १ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ सुविधा
भदौ ६, काठमाडौं । विगत ७ वर्षमा नेपालमा शून्य दशमलव १ प्रतिशत खेतीयोग्य जमीनमा मात्र सिँचाइ सुविधा थपिएको छ । आर्थिक वर्ष०६०/६१ मा ५४ दशमलव ३ प्रतिशत खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको थियो । आव ०६७/६८ मा सिँचाइ सुविधा पुगेको खेतीयोग्य जमीन शून्य दशमलव १ प्रतिशत थपिएर ५४ दशमलव ४ प्रतिशतमात्र पुगेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जानकारी दिएको छ । ‘यो अवधिमा सिञ्चित क्षेत्र खासै विस्तार भएन,’ विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले भने । सिँचाइ मन्त्रालयले सिँचाइयोग्य क्षेत्रफलमा विस्तार भएको बताए पनि अध्ययनको क्रममा त्यसो नदेखिएको लामिछानेको भनाइ छ । हाल नेपालमा करीब ३१ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुँदै आएको र त्यसमध्ये १० लाख ९३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि दाहालले बताए । ‘नेपालमा खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा थप विस्तार निकै ढिलो गतिमा भएको छ,’ दाहालले भने । बाह्रै महीना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने जमीन धेरै कम भएको उनको भनाइ थियो ।
विगत ७ वर्षको तुलनामा हाल नेपालमा खेतीयोग्य कृषि जमीन घट्दै गएको छ । खासगरी, खेतीयोग्य जमीनको खण्डीकरण हुनु तथा जमीनको व्यवसाय तीव्र गतिमा बढेकाले खेतीयोग्य जमीन घट्दै गएको प्रवक्ता डा. दाहालले बताए । आव ०६७/६८ मा नेपालमा प्रतिव्यक्ति औसत कृषि खेतीयोग्य जमीन शून्य दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । आव ०६०/६१ मा यो प्रतिव्यक्ति शून्य दशमलव ८ प्रतिशत तथा आव ०५२/५३ मा १ दशमलव १ प्रतिशत रहेको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । नेपालको तराई क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमीनको व्यवसाय अत्यधिक बढेकाले कृषि जमीनको आकार घट्दै गएको दाहालको भनाइ थियो । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै योगदान पुर्याउँदै आएको यो क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमीनको दिनानुदिन घट्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक नभएको उनले बताए ।
आव ०६७/६८ मा कुल खेतीयोग्य क्षेत्रफलमध्ये ५१ दशमलव ६ प्रतिशतमा मात्र खेती गरिएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । आव ०६०/६१ मा खेती गरिएको क्षेत्रफल ४४ दशमलव ८ प्रतिशत र आव ०५२/५३ मा यो ४० दशमलव १ प्रतिशत रहेको थियो । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या बढ्दै जानु, कृषि उपजले सजिलै बजार पाउन नसक्नु, अन्य पेशामा किसानको आकर्षण बढ्दै जानुलगायत कारण किसानसँग भएको सबै जमीनमा खेती हुन नसकेको दाहालले बताए । विगत ७ वर्षको तुलनामा अहिले नेपालमा कृषि पेशामा आबद्ध घरपरिवारमा पनि कमी आएको छ । आव ०६०/६१ मा नेपालका करीब ८० प्रतिशत घरपरिवार यो क्षेत्रमा आबद्ध भए पनि आव ०६७/६८ मा यो सङ्ख्या घटेर ७६ दशमलव ३ प्रतिशतमा पुगेको छ ।
बागलुङका कृषक केराखेतीतर्फ
भदौ ६, बागलुङ । खेतीयोग्य जमीनमा धान, मकै, गहुँलगायत अन्न कम उब्जनी भएपछि बागलुङका एक किसानले केराखेती शुरू गरेका छन् । बागलुङ-५ का मुरारीराज पन्त खेतीयोग्य जमीनमा केराखेती गरी आम्दानी बढाउन सफल भएका छन् । ‘केराबाट वार्षिक २ लाख आम्दानी हुने गरेको छ,’ पन्तले भने । तीन रोपनीमा १२ देखि १५ हजारसम्म केरा लाएको उनले बताए । ६ महीनामा १ लाख आम्दानी हुने उनले जानकारी दिए । केराखेतीबाट आफू सन्तुष्ट भएकाले बाँकी खेतमा पनि केरा लगाउने योजना बनाएको पन्तले बताए । जिल्ला हुलाक कार्यालयमा समेत कार्यरत पन्तले बिहानबेलुकीको समय मात्र केराखेतीमा लगाउने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा पन्तले मालुङगे र चिनी केरामात्र लगाएका छन् । केराखेतीलाई अगाडि बढाउन उनले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट सल्लाह सुझावसमेत लिँदै आएको बताए ।
यसैगरी बागलुङमा उत्पादित कफीको उचित मूल्य नपाएपछि स्थानीय किसान निराश भएका छन् । राम्रो आम्दानी हुने आशमा कफी खेती शुरू गरेका किसानले कफीका लागि बजार नपाएको बताए । बजार टाढा हुनु र उचित मूल्य नपाउनु कृषकको उत्पादनको मुख्य चुनौती बनेको छ । बागलुङका दमेक, हरिचौर, हटिया, दुदिलाभाटी, काँडेवास, दगातुम्डाँडा, बिहुँ, सर्कुवा, अर्गल, अमरभूमि, तित्याङ, भकुण्डेलगायत गाविसमा कफी उत्पादन हुँदै आएको छ । बजार नपाएपछि किसानले कफी घरमै भण्डारण गरेका छन् । व्यावसायिक रूपमा खेती गर्दै आएका किसानले कफीका बिरुवा काटेर फाल्न थालेका छन् । उत्पादित कफी सदरमुकाम बागलुङमा ल्याउँदासमेत ढुवानी खर्च नउठेको बिहुका अगुवा कृषक भूमिश्वर कँडेलले बताए । जिल्लाको २० हेक्टर क्षेत्रफलमा ९ दशमलव ३ मेक्ट्रिकटन कफी उत्पादन हुने गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बागलुङले जानकारी दिएको छ ।
सिध्दार्थ बैङ्कलाई म्युचुअल फण्ड स्थापना गर्न अनुमति
भदौ ६, काठमाडौं । मङ्गलवार नेपाल धितोपत्र बोर्डले सिध्दार्थ बैङ्कलाई म्युचुअल फण्ड स्थापना गर्न अनुमति दिएको छ । ‘बैङ्कले सामूहिक लगानी कोषका रूपमा काम गर्न छुट्टै योजना व्यवस्थापक कम्पनी स्थापना गर्नुपर्दछ,’ बोर्डका निर्देशक परिष्ठनाथ पौडयालले भने । बैङ्कले रू.१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विभिन्न सामूहिक योजना सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित सिध्दार्थ म्युचुअल फण्ड स्थापनाका लागि बोर्ड समक्ष निवेदन दिएको थियो । सामूहिक कोष नियमावलीअनुसार योजना व्यवस्थापकका रूपमा सञ्चालनमा आउने कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. १० करोड हुनुपर्नेछ । त्यसैगरी, सामूहिक लगानी कोषको प्रवर्द्धकका रूपमा रहनेले ५१ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार बैङ्कले कोषमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । योजना व्यवस्थापकले लगानीका इकाइको कारोबार गर्दा धितोपत्र बजारमा सूचीकरण गरेर वा आफैले खरीद(विक्री गर्ने गरी कारोबार गर्न सक्नेछ । सामूहिक लगानी कोषले कुनै योजनाको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी धितोपत्र बजारमा समेत लगानी गर्न सक्दछ । धितोपत्र बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको अभाव भइरहेको अवस्थामा सामूहिक लगानी कोषको प्रवेश भएमा धितोपत्र बजारमा स्थिरता आउने विश्वास बोर्डले लिएको छ । आव २०६८/६९ को बजेटमा सामूहिक लगानी कोषलाई आवश्यक सहुलियत प्रदान गर्ने घोषणा भएकाले कोषलाई प्रोत्साहन गर्न छिट्टै नै आवश्यक व्यवस्था हुने अपेक्षा बोर्डले गरेको छ ।
सामुदायिक वनमा टिमुरखेती
भदौ ६, बागलुङ । बागलुङका सामुदायिक वनमा व्यावसायिक टिमुरखेती शुरू गरिएको छ । स्थानीय उपभोक्ताले टिमुरखेती थालेका हुन् । काँडेवास-५ को महिला नमूना सामुदायिक वन र ७ को थाप्ले सामुदायिक वनमा टिमुरखेती शुरू गरिएको हो । वन उपभोक्ताकै सक्रियतामा महिला नमूनामा ६ सय र थाप्ले सामुदायिकमा २ हजार टिमुरका बिरुवा रोपिएको हो । जिल्ला वन कार्यालय, जीविकोपार्जनका लागि वन कार्यक्रम र चारतारे युवा क्लबको आर्थिक सहयोगमा टिमुरका बिरुवा रोपेको थाप्ले सामुदायिक वनका अध्यक्ष गुञ्जबहादुर केसीले अभियानलाई बताए । ‘३ वर्षभित्र वार्षिक रू. १२ लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्यका साथ व्यावसायिक टिमुर लगाइएको हो,’ केसीले भने । प्रतिबिरुवा पाँच पाथीसम्म टिमुर उत्पादन हुने उपभोक्ताले बताए । आम्दानी बढाउनकै लागि उपभोक्ताले ती वनमा व्यावसायिक अलैंची खेतीसमेत गरेका छन् । गतवर्षदेखि थालिएको खेती विस्तार गर्दै लैजाने स्थानीय छमबहादुर गलामीले बताए । पहिलो वर्ष५ सय केजी अलैंची उत्पादन गरी स्थानीय बजारमा विक्री गरिएको उनले जानकारी दिए ।
आगामी वर्षअलैंची उत्पादन बढ्ने भएपछि उपभोक्ताले बजारको खोजी गर्न थालेका छन् । ‘उत्पादन हुने समयसम्म बजारको टुङ्गो लगाइसक्छौं,’ गलामीले भने । उनीहरूले यातायातको अभावमा उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन समस्या भएको बताएका छन् । यसैगरी म्याग्दी जिल्लाको घतान गाविस-३ तोरीपानी स्थित घोर्लास सामुदायिक वनमा पनि टिमुर खेती गरिएको गरिएको छ । जिल्ला वन कार्यालय म्याग्दी, घोर्लास सामुदायीक वन उपभोक्ता समुह र वृक्ष सुधार तथा वन विकास हात्तिसार काठमाडौको पहलमा खेती गरिएको हो । करीब ३ हेक्टर क्षेत्रफलमा टिमुर खेती गरिएको सो वनको बिरुवा उत्पादन गर्न नसैरी पनि स्थापना गरिएको छ । जिल्लामा टिमुर खेतीलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले नसरी स्थापना गरिएको समूहका सचिव इव गिरीले बताए । नसरी स्थापनाका लागि कुल रू. १ लाख ३३ हजार लागत लागेको छ । सो क्षेत्रमा २ हजार ५ सय टिमुरका बिरुवा रोपीएको छ ।